प्रकाशित अप्रिल 27, 2017 अप्रिल 26, 2017 एक. Bharadwaj
कसरी स्वतः सुझाव मद्दत सफलता ल्याउन सक्छ?
तपाईं कसरी दैनिक जीवन यो लागू गर्न सक्नुहुन्छ?
यो एक प्रक्रिया हो, छैन एक गतिविधि. त्यसैले एक प्रक्रिया के हो?
यो तपाईं एक पटक यो के छैन प्रकृतिका लगातार छ, दुई पटक वा thrice. यो तपाईं आफ्नो जीवन बिताउन कसरी शैली बन्न गर्नुपर्छ. यो तपाईं एक पल्ट यो गरेको र रोकिएका छन् कि प्रक्रिया छैन. त्यसैले कसरी autosuggestion काम गर्छ? यस लेखमा 'स्वतः सुझाव: आफ्नो सफलताको लागि प्रभावकारी अवचेतन मन कार्यक्रम प्रविधी’ तपाईं आफ्नो अवचेतन मन कार्यक्रम गर्न विभिन्न autosuggestion तरिकाहरू सिक्न हुनेछ.
यस्तो भनिन्छ कि, आफ्नो शब्द र विचार जडित एक अर्कासंग. त्यसैले यो धेरै शक्तिशाली शब्दहरू प्रयोग गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ. तपाईं शक्तिशाली शब्दहरू प्रयोग भने यसलाई आफ्नो विचार पनि एक परिवर्तन सिर्जना. त्यहाँ पवित्र र शक्तिशाली नाम जप पावर छ. हरेक धर्म मा, चाहे त्यो बौद्ध छ, इस्लाम, क्रिश्चियन त्यहाँ प्रभुहरूका पवित्र नाम जप छ एउटा कुरा साझा छ.
जापानी सधैं भन्न गम bateba kudasaye जसको अर्थ आफ्नो सबै भन्दा राम्रो के. तिनीहरूले भाग्य निर्भर छैन. तपाईं आफ्नो मनमा राम्रो निर्देशन दिन भने यो निर्देशन विश्वास सुरु. बेहोश अवस्थामा तपाईं त धेरै पटक गरेका. तपाईंले यसलाई धेरै पटक देखेको छु. तर तपाईं यो consciously गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईं जो संयोगले तर विकल्प द्वारा आफ्नो जीवनमा रूपान्तरण सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ. यो डिजाइन द्वारा छ पूर्वनिर्धारित छैन. तपाईं पूर्वनिर्धारित एक जीवन बिताउन छैन डिजाइन गरेर जीवन बिताउन. मलाई तपाईं स्वतः सुझाव प्रक्रिया शेयर.
स्वत: सुझाव प्रकृतिका सकारात्मक हुनुपर्छ.
तपाईं सधैं आफ्नो मनमा सकारात्मक निर्देशन दिन पर्छ सम्झना. क्षण तपाईं नकारात्मक निर्देशन विश्वास छैन यो बदला हुनेछ दिन. तपाईं खेल खेल्न छैन आफ्नो बच्चाहरु बताउन यदि, चलचित्र हेर्न छैन, तिनीहरूले फेरि स्पष्ट गर्नेछ. जब प्रेममा केटा र केटी गिरावट तपाईं केटी केटा लाग्छ छैन भन्न, शरीर लाग्छ छैन त्यो थप लाग्छ हुनेछ.
सकारात्मक निर्देशन मन दिएर यो धेरै छिटो लिन र यसलाई अनुकूल हुनेछ. तपाईं नकारात्मक दिन र यसलाई स्वीकार छैन. तपाईं विमान मा यात्रा गर्दै अर्को उदाहरण लिन. अचानक केही समस्या भयो. कल्पना हावा पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री उठ्छ र 'हामी माथि दायाँ आफ्नो सिट छ तपाईंलाई अनुरोध भन्छन्, आफ्नो सीट बेल्ट धारण, हाम्रो विमान केही समस्या छ. कृपया लिने छैन तनाव र एक आतंक मा हुन छैन.
तपाईं के हुनेछ थाहा? क्षण त्यो तनाव लिने छैन भन्छन्, आतंक महसुस छैन, मात्र तनाव र आतंक वृद्धि हुनेछ. हो वा कुनै? हावा पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री मात्र सकारात्मक बोल्न प्रशिक्षित गरिएको छ भने भइरहेको र भन्छ 'सोझो आफ्नो सीट बेल्ट राख्नुहोस् र आराम मा बस्न. चाँडै आफ्नो मन विश्राम हुन्छ. तपाईं स्पष्ट यो उदाहरणबाट बुझ्न सक्छौं.
Autosuggestion भिजुएलाइज्ड गर्नुपर्छ.
2तपाईं स्वतः सुझाव अन्तरक्रिया गर्दा यो भिजुएलाइज्ड र तस्विरमा गर्नुपर्छ ND कदम हो. जब एउटा स्वतः सुझाव पूर्ण भिजुएलाइज्ड गर्न सकिन्छ, यो धेरै राम्रो काम गर्दछ. थप तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, अधिक आफ्नो मन संग राम्रो काम गर्न सक्छन्. म यसलाई उदाहरण धेरै दिन सक्छ. एक शिक्षक शब्द हत्या सिकाउन प्रयास भएको थियो र विद्यार्थीहरूलाई यो याद गर्न गाह्रो थिए. शिक्षक तिनीहरूलाई त्यहाँ एउटा 'गधा' माथि एक गधा छ कल्पना र भन्नुभयो गधा 'म माथि. म माथि त्यहाँ सम्पूर्ण राष्ट्र हो. विद्यार्थीहरू सजिलै यो पायो.
एक व्यापार स्कूलमा, मार्केटिङ विद्यार्थीहरूलाई सिकाइएको थियो. को मार्केटिङ संकाय तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो पार्टी मा रहेको छ विद्यार्थीहरू 'भन्नुभयो. यो एक नयाँ वर्ष पार्टी र सबै बालिका छ, केटाहरू खडा छन्. एक केटा सुन्दर केटी जान्छ र उनको बताउँछ 'हे तपाईं धनी र सुन्दर छन्, म स्मार्ट छु र सुन्दर तिमी मलाई बिहे हुनेछ?
शिक्षक यो प्रत्यक्ष मार्केटिङ भनिन्छ भन्छन्. सबै विद्यार्थीहरू तुरुन्तै राम्रो चित्र दृष्टिगत सक्छ. अर्को केटा प्रस्ताव गरे र केटा को तर्फबाट केटी जान्छ र भन्छ उनको 'तपाईं उसलाई विवाह हुनेछ?'यो भनिन्छ विज्ञापन. तेस्रो मामला मा, केटी केटा जान्छ र भन्छ 'हे केटा मलाई बिहे थियो?'यो ब्रान्ड पहिचान भनिन्छ. उहाँले यो जस्तै विद्यार्थी सिकाउन सानो Jokes बनाउँछ. यसरी, त्यहाँ चाँडै सन्देश स्वीकार मन.
दैनिक तपाईं प्राप्त र कविता भन्नु 'म एक धनी र सफल व्यक्ति हुँ', के तपाईं साँच्चै एक धनी बन्न सक्छ, सफल व्यक्ति? दृश्य र भावना बिना यो असम्भव छ. राम्रो कागज को पाना मा बयान लेख्न र यो छडी जहाँ तपाईं आफ्नो अधिकांश समय हेर्न सक्नुहुन्छ.
Autosuggestion जारी गर्नुपर्छ:
तपाईं autosuggestion द्वारा एक दिन मा परिणाम प्राप्त गर्न आशा गर्छन्? यो असम्भव छ. दैनिक तपाईं बयान जारी छ. राम्रो तपाईं तल आफ्नो व्यक्तिगत लक्ष्य जस्तै बयान लेख्न र बयान कविता भन्नु. यसरी तपाईं बानी कार्य पर्नु र आफ्नो मन सजिलै बयान स्वीकार गर्न सक्छन्.
तपाईं आफ्नो मन तनावमुक्त र शान्त हुँदा स्वतः सुझाव अभ्यास गर्न
बिहान र साँझ यी अभ्यास उत्तम समय हो. तर तपाईं कम्तिमा पाँच पटक एक दिन अभ्यास गर्नुपर्छ. यसरी, तपाईं आफ्नो मन कार्यक्रम बनाउन सक्छ र यो तपाईं आउने. आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तकमा नेपोलियन हिल 'विचार र रिच बढ्न' autosuggestion शक्ति लिखित छ. एक कसरी autosuggestion प्रविधी धनी बन्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
autosuggestion को विज्ञान मन कार्यक्रम को प्रविधी छ. मस्तिष्क को बायाँ भाग अवचेतन मन भनिन्छ, जहाँ सबै डाटा अघिल्लो जन्मेका देखि भण्डारण छन्. autosuggestion प्रविधी प्रयोग, तपाईं आफ्नो मस्तिष्क मा नयाँ विचार र कार्यक्रम भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ. यसरी तपाईंले निर्देशन केही सेट खुवाउने आफ्नो मन नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ.
मनन वा योग Nidra प्रदर्शन गर्दा मन कार्यक्रम गर्न एक राम्रो तरिका हो. मनन समयमा आफ्नो मन शान्त र शांत छ किनभने. अन्य कुनै विचार आफ्नो मनमा आउन. यसलाई सजिलै तपाईंले यो समयमा खुवाउन सुझाव पालन गर्न सक्नुहुन्छ.
Autosuggestion तपाईंलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ:
उत्प्रेरित पुरा दिन रहन, आफ्नो कार्यालय काम समयमा, अध्ययन.
तनाव हटाउन, निराशा, चिन्ता.
ध्यान र एकाग्रता सुधार.
आफ्नो मन कार्यक्रम.
तपाईं स्वतः सुझाव सन्दर्भमा कुनै पनि प्रश्नहरु छन् भने: आफ्नो सफलताको लागि प्रभावकारी अवचेतन मन कार्यक्रम प्रविधी’ त्यसपछि आफ्नो टिप्पणी तल ड्रप.
आफ्नो सफल जीवनको लागि कदम लक्ष्य सेटिङ सूत्र कदम
तनाव व्यवस्थापन: तनाव र अवसाद कसरी पिट्न…
सर्वश्रेष्ठ प्रेरक भाषण विद्यार्थीहरूले
तपाईंको अंग्रेजी बोल्ने fluency कसरी सुधार गर्न | अंग्रेजी सिक्नुहोस्
5 तिमीलाई थाहा छैन अत्यधिक सफल मान्छे को बानी
साँचो आनन्द के हो? कसरी सधैं खुसी रहन? यो…
आफ्नो सफल लागि शीर्ष रहस्य फेला, को मा आनन्दित जीवन…
उत्कृष्ट प्रेरक परिवर्तन गर्न सक्ने सफलता मा उद्धरण…
स्वतः सुझाव: आफ्नो सफलताको लागि प्रभावकारी अवचेतन मन कार्यक्रम प्रविधी, autosuggestion, मन कार्यक्रम प्रविधी, अवचेतन मन
सर्वश्रेष्ठ प्रेरक भाषण विद्यार्थीहरूले | विद्यार्थी प्रेरणा way2inspiration.com
सही वजन आहार योजना- वजन फास्ट गुमाउनु(सहित आहार चार्ट
प्रेम र जीवन मा शक्तिशाली आध्यात्मिक उद्धरण सबै समय उत्प्रेरित रहन
सबै तपाईं UPCPMT बारेमा जान्नु आवश्यक छ 2018
आफ्नो सफल लागि शीर्ष रहस्य फेला, वर्ष मा आनन्दित जीवन 2018
लोकप्रिय अनलाइन स्टोर देखि आश्चर्य तपाईं प्रदान गर्दछ